Igodo 3 na ntinye aka na teknụzụ teknụzụ dị mma Martech Zone
Wednesday, April 27, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ngosipụta: Post na giveaway na-akwado site na Comcast Small Business, mana echiche niile bụ nke m. Biko gụọ n'okpuru ebe a maka nkwupụta ọzọ.
Na-agụ site na isi posts na Comcast Business obodo saịtị, onye a dara ezi maka anyị dịka ụlọ ọrụ na ndị ahịa anyị. Dịka ụlọ ọrụ, anyị na-enye ọtụtụ teknụzụ ikike, mana anyị nwere ike ịgbasa ụgwọ (ma nweta ụgwọ ọrụ nke iji teknụzụ) gafee ndị ahịa anyị niile.
[igbe ụdị = ”ihe ịga nke ọma” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]Hapụ votu gị iji nyere aka chọpụta onye ga-emeri $ 20,000 na asọmpi @Comcastbusiness I4E. Votu ugbu a - Mee 13 # I4E #ad [/ igbe]
Na nkeji iri na ise ọ bụla, anyị na-eme nyocha nke nyiwe anyị na-enye ikikere ma chọpụta uru ha na-ewetara anyị ndị ahịa anyị. Ọtụtụ mgbe, anyị na-akagbu aha anyị na ụfọdụ nnukwu nyiwe ma ọ bụrụ na ha anaghị enye nloghachi anyị chọrọ ha.
Dabere na Comcast Azụmaahịa, ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị nwe ụlọ ọrụ na-enwe mmetụta na-agwụ ike ma a bịa na teknụzụ @Comcastbusiness
Ihe omuma ihe omuma a sitere na Comcast na-egosi ogidi isi 3 i kwesiri ichebara echiche tupu i tinye ego nke uzu oru:
Atụmatụ azụmahịa - Tupu i tinye ego, kedu ozi na ahịa gị? Nkà na ụzụ ị na-etinye ego ọ ga-akwado ọhụụ gị?
Na-ejuputa oghere - Tupu ị tinye ego, teknụzụ a ọ ga - enyere aka dozie nsogbu gị, ka ọ ga - eme ka oge na isi ọwụwa na ndị ọrụ gị?
Nweta Ndụmọdụ - Tupu i tinye ego, ị gwala ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị okwu? Anyị na-agakwuru ndị ahịa na nhọrọ ndị na-ere ahịa ebe ọ bụ na anyị maara ọtụtụ nyiwe na ahịa.
Ndụmọdụ Pụrụ Iche na m ga-agba ndị azụmaahịa ume ka ha jiri wee laghachi. Teknụzụ nke teknụzụ na-agbadata ma ọ bụrụ na ị naghị elezi ha anya!
ngosi: Comcast Business soro na ndi na ede blọgụ di ka m maka mmemme a. Dịka akụkụ nke mmemme a, enwetara m ụgwọ maka oge m. Ha agwaghị m ihe m ga-azụ ma ọ bụ ihe m ga-ekwu gbasara ngwaahịa ọ bụla ekwuru na post a. Comcast Business kwenyere na ndị na-azụ ahịa bụ ndị na-ede blọgụ nweere onwe ha ịmepụta echiche nke aka ha ma kesaa ha n'okwu nke aka ha. Amụma Comcast Azụmaahịa kwekọrọ na Usoro WOMMA, ụkpụrụ FTC, yana atụmatụ itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta.
Tags: keukwucomcast azụmahịazooi4einvestmentsntinye ego teknụzụ ahịaSponsoredntinye ego nke techntinye ego na teknụzụ
Eventbrite + Teespring: Ree T-uwe elu Gị Tiketi